Efa tonga i Elia, saingy...
Naseho ny : 14 desambra 2019
Sabotsy 14 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 17, 10-13.
Akaikiy ny andron'ny Tompo, indro izy fa avy hamonjy antsika.
I Jesoa nidina avy tany an-tendrombohitra dia maneho azy Andriamanitra, nidina naka ny fombantsika olombelona ety an-tany sady nilatsaka ambanintsika olombelona aza ka tonga mpanompo mba hanandratra antsika hitovy Aminy. Koa aza gaga isika raha tsy nahatakatra ny mpianany ka voatery nanontany.